‘Madoda, guqulani indlela yokuziphatha uma ningafuni ukubizwa ngodoti’, kusho uMalema | News24
LAST UPDATED: 2019-06-19, 13:31
‘Madoda, guqulani indlela yokuziphatha uma ningafuni ukubizwa ngodoti’, kusho uMalema
Johannesburg – Umholi we-EFF uJulius Malema usephonsele inselelo amadoda aseNingizimu Afrika amelene nomkhankaso othi #MenAreTrash ukuthi aguqule indlela yokuziphatha futhi aqale avikele abantu besifazane.
Ekhuluma emgubhweni we-Africa Day obuseJoubert Park, eGoli, ngoLwesine, uMalema uthe owesilisa osolwa ngokubulala uKarabo Mokoena, 22, owanikeze isithombe esingesihle amadoda akuleli.
Uthe esikhundleni sokulwisana nalo mkhankaso odla lubi ezinkundleni zokuxhumana kulandela ukubulawa kukaMokoena nabanye abantu besifazane kuleli, amadoda kumele azinuke amakhwapha ngendlela abesifazane, izingane kanye nezaguga abaphathwa ngayo emiphakathini.
“Kumele sonke sizithwese lo mthwalo. Wonke amadoda akuleli angodoti uma singafuni ukubizwa kanjalo kumele siguqule indlela esiziphatha ngayo.
OLUNYE UDABA: 'Ushadile futhi unezingane ezintathu' osolwa ngokubulala uKarabo Mokoena
“Ukufa kukaKarabo kumele kusivuse emaqandeni thina singamadoda. Musani ukuziphatha kanje,” kusho uMalema.
Uqhube wathi abantu bangalindeli ukuthi bahlonishwe “umlungu” uma besaqhubeka nokungabahloniphi abantu esifazane.
“Uzinihlonipha kanjani umlungu uma ningabahloniphi abantu besimame? Uma nibona abantu besifazane nibona abantu bokuhlukunyezwa, anibathathi njengabantu abafana nani,” esho.
“Kuqala ngawe, kumele uzihloniphe wena kuqala.”
Uthe akukhathaleki noma ngabe umuntu weisfazane ubumupha imali futhi umthengela izinto, asikho isizathu sokuthi umhlukumeze.
LIVE: Proteas lose early wicket of De Kock